HORDHAC : Chelsea VS Frankfurt? Stamford Bridge oo caawa marti gilin doono kulan kala bax ah – Gool FM
Bashiir May 9, 2019
( Europe ) 9 Maajo 2019 kooxda ka dhisan Galbeedka Londone ee Chelsea ayaa garoonkeeda ku soo dhaweeneysa Kooxda Frankfurt kulanka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League.
Kulankii lugtii hore ayaa lagu soo kala baxay bar-baro 1-1, kooxda Bules ayaan soo dhashatay gool banaanka ah oo wax tar u noqon kara wallow Kooxda Frankfurt ay tahay koox aan la dhayal san karin.
Antonio Rudiger iyo Callum Hudson-Odoi ayaa labadoodaba dhaawac muddo dheer kaga maqan Chelsea halka Maurizio Sarri uu xaqiijiyay in N’Golo Kante uu garoomada ka maqnaan doono dhaawac ka soo gaaray muruqa balse waxa uu sheegay in adeegiisa la heli doono hadii ay u gubaan Finalka tartankan oo la ciyaari doono 29ka May.
Mateo Kovacic ayaa la filayaa inuu qeyb ka ahaado khadka dhexe isaga oo ka faa’ideysanaya maqnaanshaha Kante, halka ciyaartoyda joogtada ah ee Europa League ee Emerson Palmieri, Willian iyo Olivier Giroud ay ku soo bilaaban doonaan.
Dhanka kale, Frankfurt, ayaa soo dhaweysay weeraryahanka reer Croatia Ante Rebic ka hor safarka London waxaana la arki doonaa hadii Mijat Gacinovic kursiga keydka la dhigk, halka weeraryahan Sebastien Halleri uusan diyaar u aheyn kulankan sababo calool xanuun dartii.
Kulanka : Eintracht Frankfurt VS Chelsea ( Europa League)
Garsoorka :Ovidiu Hategan (Romania)
Chelsea waligeed lagama badin kulan gurigooda ay kula ciyaartay kooxaha Jarmalka tartamada oo dhan, todobo jeer ayey badisay, laba barbaro ayay gashay, waxaana ay shabaqooda gool ka ilaashadeen todobo kamid ah sagaalkoodii kulan ee ay ciyaareen.
Eintracht Frankfurt ayaa laga badiyay afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti u aheyd kooxo Ingiriis ah iyagoo celcelis ahaan laga dhaliyay 11 gool. Si kastaba ha ahaatee, kulankoodii ugu dambeeyey ee koox England ah guul ay ka garaan waa Spurs sanadii 1982-dii.
Chelsea ayaan laga badin 16kii kulan ee ugu dambeeyey ee tartanka Europa League, waana tartankooda ugu badna oo ay guulo ceynkan ah ka garaan tan iyo 2009-10.
Dhammaan afartii kooxood ee hore ee lugta koowaad ee wareega semi-finalka tartanka Europa League ku soo dhameesta bar-baro iyaga oo marti ah waxa ay u gudbayeen Finalka tartanka, kooxdii ugu dambeysay ee sidaa sameeysana waa Kooxda Atletico Madrid oo wajahday Arsenal xili ciyaareedkii hore.
Chelsea ayaa gaari karta Finalkeedii ugu horeeyey ee tartan Yurub ah tan iyo markii ay ku guuleysteen koobka Europa League 2013, kaddib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Benfica waxaana xilligaas tababare Kooxda ka ahaa Rafael Benitez.
Weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud ayaa dhaliyay 10 gool oo Europa League xilli ciyaareedkan, ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee goolal badan u dhaliya koox Ingariis hal xilli ciyaareed gudihiisa tartamada yurub iyada oo ay ku jiraan kulamada isreebreebka waa Alan Shearer kaas oo dhaliyey 11-gool.
HORDHAC : Velencia VS Arsenal? Malaga yabaa in Arsenal ay la kulanto waji gabixii soo gaaray Kooxaha Barcelona iyo Ajax?